Usolwa "ngokudiza" ngamadodakazi - Ilanga News
Home Izindaba Usolwa “ngokudiza” ngamadodakazi
“Enye yawo okuthiwa ineminyaka ewu-15 ubudala, inezinyanga eziwu-6 izithwele”
KUXABENE ubendle emndenini wakwaBiyela oBuka, eMpangeni ngenxa kamama wekhaya osolwa yindodana yakhe “ngokudayisela” inyanga yasendaweni amadodakazi akhe amabili, enye yawo okuthiwa ineminyaka ewu-15 ubudala.
Le nyanga enguMnu Velenkosini “Maziphi” Hleleni (49), (osesithombeni) edume ngokudayisa izimbiza esiteshini eMpangeni, isivulele lo mndeni icala iwusola ngokuzama ukuyibulala. UMnu Hleleni uthi unamakhosikazi awu-7 nezingane eziwu-48.
Ngokuthola kweLANGA, indaba iqale ngokuthi uMnu Hleleni athandane nentombazane yakulo muzi endala – ILANGA elinalo igama layo ezalwa ngubaba wakhona omdala, okuthe sekuphakathi nothando lwabo, eselungiselela ukulobola, wathola ukuthi intombi kayiziphethe kahle, inelinye isoka.
UMnu Hleleni uthi wabikela umkhwekazi wakhe owathi makabheke kodadewabo bendodakazi abancane abakhona egcekeni.
Uthi wabe esethandana nenye eyayineminyaka ewu-20 ubudala ngesikhathi beqala ukuthandana ngo-2017 nayo esiligodlile igama layo.
“Emuva kokulobola ngezinkomo ezine, ngiyithathile ingane ngayohlala nayo emzini wami ngokuvumelana nabazali bayo, ngoba ngenzela ukuthi ingangigili iqome njengodadewabo.
“Besihleli kahle emzini wami ngiyenzela konke, nasekhweni ngibenzela konke. Abazali bengoduso ngabathengela umbhede kade belala phansi, ngabathengela ifriji ngenzela ukuthi ubaba wakhona aphuze ubhiya obandayo, ngabafakela iDStv ngithi ngifuna bajabule ngibabonga ngokungipha umakoti.
“Bengihlale ngibahambisela ukudla, yize ingane yabo bese ngihlala nayo,” kusho uMnu Hleleni. Uthi nentombi yesibili igcine ngokukhulelwa ngo-2018, wahambisa inkomo yenhlawulo ngoba ikhulelwe engakaqedi ukulobola.
Uthi ingane isinezinyanga eziwu-7, uthuke wacishe washayeka phansi ethola ukuthi akuyona eyakhe, ingoduso imithiswe yisoka layo lakudala eyayifunda nalo.
“Ngaya ekhweni ngayobikela abazali bayo ngifuna bangibuyisele inkomo yami, bathi mangingakhathazeki, ziningi izintombi egcekeni bazovala ihlazo ngodadewabo. Ngavuma sathandana nodadewabo omncane (oneminyaka ewu-15 ubudala). Besithandana kukuhle, umkhwekazi ethi kuzomele ngikhiphe ezinye izinkomo ngoba usenginike indodakazi yakhe encane.
Uthi indaba yonakale ekuqaleni kwale nyanga ehlaselwa ngabasekhweni lakhe beyolanda “ingoduso” yakhe yokugcina, bephethe izinhlokohlela zezibhamu, bethi uyithathe ngokungemthetho.
“Isono sami wukuthi bengingasabahambiseli oshekhasi bokudla, yingakho sebeyilanda. Okungiphatha kabi wukuthi bayithatha nje, isikhulelwe ingane yami, bazohluleka wukuyinakekela ngendlela.
“Ngibavulele icala lokungikhomba ngesibhamu, ngiyabona ukuthi sebefuna ukungibulala,” kusho yena. Indodana endala yakwaBiyela, uMnu Mandlakhe Biyela, isole unina ngokudayisa ngodadewabo.
“Le nto ngiyikhuze isaqala ukwenzeka, ngambuza umama ukuthi uvumelani izingane zandawonye zithandane nomuntu oyedwa ngoba izodala umonakalo. Ubezithathela izinqumo yedwa, engambikeli ubaba ngakwenza nomkhwenyana wakwakhe.
“Bebejabula esabathengela umbhede nazo zonke izinto. Namhlanje sebexabene bodwa. UHleleni kalikho icala alenzile, ubakhokhele zonke izimfanelo abebezicelile kwaba yiwona amantombazane asekhaya angaziphethe kahle. Kukho konke, ngisola umama; nguyena obe nesandla. kwakumele angayivumi kwasekuqaleni le nto ngesikhathi iqala ukwenzeka,” kusho uMnu Biyela.
Ubaba wekhaya, uMnu Jabulani Biyela, ukhale ngokuthi uMnu Hleleni uxhaphaza umndeni wakhe ngoba azi ukuthi unemali.
“Le ndoda kayikaze ilobole, yagcina ngokuzocela isihlobo esihle yakhokha imali encane. Iqale yathanda no……(esho indodakazi endala yomfowabo), yabe isithandana no…..(esho indodakazi yakhe), yamcela.
“Ngesikhathi ifika izocela u….ubefunda isikole. Kuthe langa limbe, ngabona kufika umbhede, ngabuza ukuthi ngokabani, yathi ithengela thina ngoba sesifana nabazali bayo. Kwadlula isikhathi, yathenga ifriji yafaka neDStv ngingayicelanga. Ngisamangazwe yilokho, kwathiwa u….usekhulelwe, yaletha inkomo yenhlawulo.
“Ngikhuluma ngengane ebifunda uGrade 9 ineminyaka ewu-14, esahola imali yesibonelelo sikahulumeni. NgoLwezi (November), wayithatha ingane wayohlala nayo ehhotela engayicelile kithina. Igcine ikhulelwe, saphuphuma isisu singazi. Usephinde wayikhulelisa, kumanje inezinyanga eziwu-6 izithwele,” kusho uMnu Biyela.
Udadewabo omdala walezi zingane, uNkz Zintombi Biyela, usole uMnu Hleleni ngokulutha izingane zakwabo esebenzisa imali. “Ngonyaka ophelile ngimvulele icala lokuthumba ingane yakithi waboshwa waphuma ngebheyili ka-R10 000. Icala lakhe lagcina liphelile, angazi laqedwa yini,” kusho uNkz Biyela.
Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Mhlaba Memela, ukhuze wababaza uma ezwa lolu daba, wacela ukuthunyelelwa imininingwane yomndeni ukuze bezongenelela ngokushesha ukuze kusizakale ingane.
“Yicala elibomvu leli, kumele athathelwe izinyathelo lo muntu,” kusho uMnu Memela.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe likhona icala lokukhomba ngesibhamu elivuliwe, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUSjava ugonyuluka ngoZamar
Next articleUMiddendorp uzigxeka ngodaka lweChiefs